Drafitra fampianarana maimaim-poana - Ny fototra valisoa - drafitry ny lesona any an-tsekoly
Home Drafitra fampianarana maimaim-poana
Ny antony ilain'ny sekoly lesona amin'ny pôrnôgrafia amin'ny Internet sy ny fifampiresahana hafatra dia fintinina indrindra amin'ity fitanisana ity…
"Amin'ireo hetsika rehetra ao amin'ny Internet, ny pôrnôgrafia dia manana ny tena mety hiteraka fiankinan-doha, ” hoy ny nerlandista nerlandey Meerkerk et al.
Ny fomba tsy manam-paharoa ataontsika dia mifantoka amin'ny fiantraikan'ny pôrnôgrafia amin'ny Internet amin'ny atidoha. Izahay dia nahazo fankatoavana ho mpanazatra an'ny Royal College of General Practitioners. Raha mila tsipiriany misimisy kokoa momba ny fiantraikan'ny pôrnôgrafia ao amin'ny ati-doha dia ampirisihinay ny tena azo idiranaNy atidohanao amin'ny pôrnôgrafia- pôrnôgrafia amin'ny Internet sy ny siansa miseho amin'ny fiankinan-doha”Avy amin'i Gary Wilson. Raha mila tsipiriany misimisy kokoa dia jereo ny sidebar eo ankavanana.
Raha tsy misy ny lalàna fanamarinana taona sy ny mety hisian'ny fanidiana bebe kokoa miaraka amin'ireo ankizy manana fidirana malalaka amin'ny tranokala mamoafady, nanapa-kevitra ny The Reward Foundation fa hametraka maimaimpoana ireo lesona 7 ho azy ireo ka tsy mila mandeha ny sekoly. Tongasoa anao izahay hanome fanampiana ho an'ny fiantrana anay, raha mahatsapa izany ianao. Zahao ny bokotra "Donate" eo ankavanana.
Tsy misy sary vetaveta aseho amin'ny lesona rehetra. Mba hijerena ny atin'ny lesona tsirairay dia mandehana mankamin'ny pejy bundles ary kitiho ny sarin'ny bundles super ho an'ny taninao. Izahay dia namokatra lesona amin'ny fanontana samihafa mba hanomezana fahafaham-po ny filanao, UK, American ary International. Manana lesona fanampiny natokana ho an'ny lalàn'i Angletera sy Wales ary avy any Ekosy isika.
Tena nandeha tsara ny lesona. Mpianatra dia nirotsaka tanteraka. Ampy ny fampahalalana tao amin'ny drafitry ny lesona mba hahafahan'ny mpampianatra mahatsapa fa vonona. Tena hampianatra azy io indray.
Re: Sexting, ny lalàna ary ianao: tena nanampy be. Tian'izy ireo ny tantara, ary nahatonga ny fifanakalozan-kevitra marobe izany. Ary niresaka momba ny ara-dalàna tsy maintsy dinihina tsara izahay. Nilaza ny mpianatra fa tsy dia maika loatra amin'ny fahazoana sexting / sary izy ireo satria “mitranga foana izany”. Nilaza izy ireo fa tsy niraharaha an'io satria tsy raharaha lehibe izany. Nahagaga izany. Avy amin'ny mpampianatra 3 ao amin'ny St Augustine's RC School, Edinburgh.
"Mino aho fa mila ny toeram-piarovana azo antoka izay ahafahan'ireo mpianatra mandray anjara malalaka amin'ny olana maro mifandraika amin'ny firaisana, ny fifandraisana ary ny fahazoana ny pôrnôgrafia an-tserasera amin'ny vanim-potoana nomerika." Liz Langley, Lohan'ny Sampan-draharahan'ny Sosialy sy Sosialy, Dollar Academy
"Mary dia nanao lahateny faran'izay tsara tamin'ny zanakay lahy momba ny pôrnôgrafia: mahay mandanjalanja, tsy mitsaratsara ary be mpanome vaovao, manampy amin'ny fampitaovana ireo mpianatra antsika amin'ny fahalalana ilain'izy ireo mba hanaovana safidy tsara amin'ny fiainany.”Stefan J. Hargreaves, Master in Charge of Seminar, Tonbridge School, Tonbridge
Omeo karazana mpianatra manodidina ny pôrnôgrafia amin'ny Internet sy ny sexting mifandraika amin'ny fahasalamana ara-tsaina sy ara-batana, fahatokisan-tena, fifandraisana, fahazoana, fanerena, fanekena ary andraikitra ara-dalàna. Ity no fomba tsara indrindra hanomanana azy ireo amin'ny fiainana an-tserasera sy ivelan'ny Internet ary hananganana faharetana manoloana ireo fahavoazana mety ho lava.
Jereo ny Bundles
Pôrnôgrafia amin'ny Internet
Ny lesona ampianarintsika dia manolotra lafiny 4 miavaka, fa mifandraika amin'ity faritra ity. Ny mpianatra dia hanana fotoana hieritreretana tsara momba an'ity lohahevitra ity amin'ny alàlan'ny fampihetseham-batana mahafinaritra, fifandraisana, horonan-tsary ary fotoana ahafahana mifanakalo hevitra amin'ny toerana azo antoka ary ny tsato-kazo famantarana ho an'ny loharano hanohanana bebe kokoa:
Pôrnôgrafia amin'ny fitsarana
Fitiavana, sary vetaveta & fifandraisana
Pôrnôgrafia amin'ny Internet sy ny fahasalamana ara-tsaina
Jereo ny lesona
Manolotra lesona telo tsy mitovy izahay, nefa mifandraika amin'ity faritra ity mba handinihana ireo lafiny maro samihafa amin'ity olana sarotra ity. Ambonin'izany rehetra izany dia mampianatra ny mpianatra momba ny mampiavaka ny ati-dohany amin'ny plastika mahatalanjona sy ny fomba fampiasana tsara azy io hahomby amin'ny fiainana:
Fampidirana ho Sexting
Sexting, pôrnôgrafia sy ny atidoha tanora
Sexting, ny lalàna ary ianao
Haneho izay 28 valiny
Pôrnôgrafia amin'ny Internet sy ny sexting bundle, fanontana amerikana
Pôrnôgrafia amin'ny Internet sy bundle Sexting, Angletera
Pôrnôgrafia amin'ny Internet sy ny sexting bundle, fanontana iraisam-pirenena
Pôrnôgrafia amin'ny Internet sy bundle Sexting, Ekosy
Pôrnôgrafia amin'ny Internet sy bundle Sexting, Wales
Fambolena sary vetaveta amin'ny Internet
Bundle pôrnôgrafia amin'ny Internet, fanontana Amerikanina
Bundle pôrnôgrafia amin'ny Internet, fanontana iraisam-pirenena
Fampidirana ny sexting, fanontana amerikana
Fitiavana, pôrnôgrafia ary fifandraisana
Fitiavana, pôrnôgrafia ary fifandraisana, Fanontana Amerikanina
Pôrnôgrafia sy fahasalamana ara-tsaina
Pôrnôgrafia & fahasalamana ara-tsaina, fanontana Amerikanina
Pôrnôgrafia amin'ny fitsapana, fanontana amerikana
Sexting Bundle, Fanontana Amerikanina
Sexting Bundle, Fanontana Iraisam-pirenena
Sexting, pôrnôgrafia ary ny atidohan'ny adolantsento
Sexting, pôrnôgrafia ary ny atidohan'ny adolantsento, fanontana amerikana
Sexting, ny lalàna & Ianao, Angletera
Sexting, ny lalàna & ianao, Ekosy
Sexting, ny lalàna & Ianao, Wales
Ny fanandramana mahafinaritra amin'ny pôrnôgrafia, fanontana amerikana